Accueil > Gazetin'ny nosy > Fitondrana
Raha ny olona mpitondra fanjakana eto Madagasikara no jerena dia olona maloto eto amin’ny firenena avokoa no ankamaroan’ny miditra ao anatin’ny fitondrana ankehitriny. Mpangalatra, mpanao kolikoly, mpanodikodina volam-bahoaka na mpanondrana harem-pirenena antsokosoko any ivelany. Ireo rehetra ireo no hita sy tsapa fa ataon’ireo olom-boafidy sy mpitondra ambony amin’ny asam-panjakana maro. Hatramin’ireo mpanao «kidnapping» no misy ao anatin’ny fitondrana io.
Nolazain-tsika teto ireo depiote izay mpisoloky gaigy be ka nogadrana sy notanana am-ponja vonjimaika ny sasany. Nahitana an’i Vaonalaroy avy any Brikaville, ny depiote Nirina avy ao Antsirabe-II, ny depiote Ludovic na Leva avy any Mahabo ary ny depiote voafidy tao Fandriana Hasimpirenena. Tsy ireo irery fa mbola maro no olona tsy vita fitsarana noho ny fisakanan’ny depiote ny “dossiers” itoriana azy ireo ao amin’ny HCJ (fitsarana avo). Mikatso ny fitoriana an’i praiminisitra Solonandrasana Olivier Mahafaly, Andriamosarisoa Jean Anicet minisitry ny fanatanjahantena teo aloha, ny minisitra ny fahasalamana ny profesora Mamy Lalatiana Andriamanarivo sy ny maro hafa koa. Fantatra fa misy resaka kolikoly avolenta no tsy amoahan’ny depiote ny fankatoavana ny hitsarana ireo olona ireo.
Ankoatran’ireo dia niarahana nahalala koa ny raharaha fanondranana andramena antsokosoko izay nahavoakasika mpitondra ambony na olom-boafidy tamin’izany andro izany izay nataon’i Ravalomanana Marc, Jaovato sy ny tariny. Niditra tao anaty fitondrana avokoa izy ireo mba hiarovan’ny lalàna azy ireo (depiote sy govenemanta).
Teo amin’ny fitantanana ny kaominina tao Toamasina koa dia nigadra koa ingahy Ratsiraka Roland izay ben’ny Tanana tamin’izany andro izany ary depiote ankehitriny sy efa minisitra ihany koa teo aloha. Tsy hadino koa ny raharaha ny banky foibe tany Manakara izay nangalaran’i Ranjeva Louis ny vola tao amin’ity banky ity, ka nandosirany any ivelany hatramin’izao.
Ankehitriny dia miseho amin’ny endrika maro indray ny fanodikodinana volam-bahoaka sy ny fananam-bahoaka. Toa ny any Matsiatra ambony izay iadian’ny mpitondra ny any an-toerana ny kariaram-bato any Ikalamavony. Mbola ao koa ny raharaha volamena any Betsiaka any amin’ny faritra Antsohihy iny.
Lasa sehatra fiarovan-karena sy fialokalofana ny olon-dratsy ny asam-panjakana ankehitriny.
Randriambe Jesy Rabelaolao